Manjaro 21.1.6 inogadzirisa yapfuura vhezheni yekuisa matambudziko | Linux Vakapindwa muropa
Musi waGumiguru 8 vakaparura iyo v21.1.5 yeiyi yakakurumbira Arch Linux-yakavakirwa kugovera. Izvo hazvina kuuya kwenguva refu mushure meiyo yapfuura dot gadziriso, uye ini ndinofunga izvo zvekumisikidza nyaya zvine chekuita nazvo. Muna 21.1.4 uye mukutanga kuburitswa kwe21.1.5 zvaisaita kuisa system kana BTRFS isina kushandiswa, bhagi rinotarisirwa kunge rakazogadziriswa mune Manjaro 21.1.6 , que inowanikwa kubva nezuro manheru.
Manjaro 21.1.6 inowirirana yakagadzikana vhezheni 2021-10-16. Yekutanga kuverenga ndiyo iyo inotakurwa nemifananidzo yeIO, uye kune vashandisi varipo mapakeji anovandudzwa kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa uye kuverenga ndiyo zuva. Uye kana iri nhau, ivo havana kunyanya kuzivikanwa, kunyanya kune avo vasingashandisi KDE software.
Pfungwa dzeManjaro 21.1.6
KDE Gear yakagadziridzwa kusvika 21.08.2.
KDE Mapurani akaisa kune 5.87.0.
Python uye Haskell inogadziridza.
Zvimwewo zvakajairika package.
Iyo yekuvandudza muManjaro KDE inorema zvishoma kupfuura 700mb, nepo mune dzimwe shanduro, senge i3, ingori pamusoro pe400mb. Zvinotoshamisa kuti panguva ino tsanga hadzina kuongororwa, asi kwete zvakawanda kana isu tichifunga kuti ivo vakagadzirisa ivo 8 mazuva apfuura. Iyo nyowani ndeye Linux 5.14.10, uye ivo vanoona kuti iwo 5.13 akateedzana akatosvika kumagumo ehupenyu hwayo kutenderera (EOL).
Nezve matambudziko anogona kuvepo, kana uchigadzirisa kana kuisa Manjaro 21.1.6 Steam yaigona kuratidza dema chidzitiro, kunyangwe chokwadi chiri chekuti ini ndanga ndatova nedambudziko rakafanana, izvo zvakandimanikidza kuti ndichinje maonero eiyo interface. Vanotaura zvakare kuti Firefox inogona kusanganisa mitauro.
Manjaro 21.1.6 inowanikwa kwemaawa anodarika gumi nemaviri, saka kurodha pasi, ese ari maviri emifananidzo yeIO uye emapakeji matsva kubva kuhurongwa hwekushandisa, anofanira kunge achifamba mushe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.1.6 (2021-10-16) inogadzirisa yapfuura vhezheni yekumisikidza matambudziko uye pampers KDE vashandisi zvakare